မော်ဒန်နှင့်အဓိက ကွဲလွဲသည့်အချက်မှာ အလုံးစုံအတွက် တခုတည်းသောအမှန်တရား ကိုငြင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
လူသည်သဘာဝအရ ကိုယ့်အယူအဆ။ သိမှတ်လက်ခံထားမှုများကို
ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတို့မှ ထောက်ခံပံ့ပိုးစေလိုသည်။
လူတဦးချင်း၏ သိစိတ်သည် အထီးတည်းမဟုတ်။ အဆက်အစပ်ရှိသည်။
သိစိတ်သည် လူတဦးနှင့်တဦး ဘာသာစကားကြားခံဖြင့်ကူးလူးဆက်ဆံရင်းပေါ်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ အချုပ်မှာ လူ့သိစိတ်သည် လူမှုဝန်းကျင်နှင့် တရစပ်ထိတွေ့နေရသည်။
သည်အခြေခံပေါ်မှာထိုင်ပြီးမော်ဒန်ခေတ်တွင်အားလုံးအတွက်အမှန်တရားတခု ယုံကြည်မှုတခုကိုရှာသည်။ နမူနာဆိုရသော် ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်ဖြင့်သာ သာယာဝပြောသောလူ့ဘောင်ကိုရောက်ကြရမည် ဆိုတာမျိုးဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများသွေးစည်းကြ ဆိုတာလည်းဒီသဘောပဲဖြစ်သည်။
ကိုယ့်အတွက်အမှန်သည် သူ့အတွက်လည်းအမှန်ဖြစ်ရမည်။ ဘယ်သူမဆို၁၀တန်းမှာအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ရင်
ဦးဘ၏အမှန်တရားသည် ဘေးအိမ်ကဦးမြ၏အမှန်တရားနှင့်မတူတော့စိတ်မသက်သာစရာဖြစ်ရသည်။ မိမိ၏အတွေ့အကြုံအစုံအလင်ကိုတလမ်းသွားအမှန်တရားထဲမော်ဒန်လူသားကမောင်းသွင်းသည်။ မိမိကိုယ်ကိုထိမ်းချုပ်ဖို့အခြားသူများကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာကြတော့သည်။ မော်ဒန်တခေတ်လုံး(၁၈ရာစုမှသည်၂၀ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်ထိ)၏အာဏာရှင်ဆန်မှုသည်ထိုအယူအဆမှမွေးဖွားလာခဲ့လေသည်လား မပြောတတ်နိုင်။ ဟစ်တလာကအာရိယန်သွေးသည်သာမြင့်မြတ်သည်။ ဒါ့ကြောင့်ကမ္ဘာကိုအုပ်စိုးရမည်ဆိုသည်။
ပို့စ်မော်ဒန်က မော်ဒန်လူသား၏ ထိုဗဟိုမှချုပ်ထားသောအတွေးအခေါ်ကိုတွန်းထုတ်သည်။
လက်တွေ့အဖြစ်ရပ်များအရ ဒီအယူအဆ အလုပ်မဖြစ်တော့ဟုမြင်လာကြသည်။
Posted by KZကေ at 23:17
တောလူသစ် November 23, 2009 at 1:01 AM
KZကေ November 24, 2009 at 12:31 AM
T2A November 27, 2009 at 10:23 PM
"လူသည်သဘာဝအရ ကိုယ့်အယူအဆ။ သိမှတ်လက်ခံထားမှုများကို
ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတို့မှ ထောက်ခံပံ့ပိုးစေလိုသည်။"
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားဖို.လိုလိမ့်မယ်ဗျ၊ ကိုယ့်အယူအဆကို အသိအမှတ်ပြုခံချင်ရုံတင်ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးပြောဖို.မရှိပေမယ့် ။ကိုယ့်အယူအဆက သူများကို လွှမ်းမိုးချင်တာဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီး ဟန်ကျမယ်မထင်ဘူး။
T2A November 27, 2009 at 10:48 PM
"အချုပ်မှာ လူ့သိစိတ်သည် လူမှုဝန်းကျင်နှင့် တရစပ်ထိတွေ့နေရသည်။
လူမှုဝန်းကျင်နှင့် တရစပ်ထိတွေ.နေရတာ မှန်ပေမယ့် ဒီအတွက်တစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ဖြင့် "အားလုံးအတွက်အမှန်တရားတခု ယုံကြည်မှုတခု"ကို ရှာနေဖို. မလိုဘူးထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သူတို.တော့မှားနေပြီ ငါတွေးတာကပဲမှန်တယ် ဒါ့ကြောင့် သူတို.ကို အမှန်တွေသိပါစေတော့ ဆိုပြီး စစ်တိုက်ခဲ့ကြတာတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။ အာဏာရှင်တွေရဲ. ပြဿနာက တခြားလူတွေကို လွှမ်းမိုးချင်စိတ်၊ နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်ချင်စိတ်အားကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
KZကေ December 7, 2009 at 9:23 PM
nation building ကိုအိမ်မှာအရင်လုပ် ပြီးမှကမ္ဘာကြီးကိုကူပါတဲ့
အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု လူနေမှုစတိုင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုသာလိုက်ပါ
ကမ္ဘာကြီးသာယာဖို့ အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ်တယ်ဆိုပဲ
သို့သော်အတော်တာသွားတဲ့ အတွေးအခေါ်ပါ စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူး
T2A December 7, 2009 at 9:52 PM
ငြင်းခုန်နေကြတာတွေကိုတော့ သင့်သလောက်ဖတ်ဖူးပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောကြစတမ်းဆိုရင်တော့ လက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ. အခင်းအကျင်း စနစ်တွေကို အနောက်က အထူးသဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာ အမေရိကန်က ဦးဆောင်ချမှတ်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ လောလောဆယ်ထိလည်း သူတို.ချမှတ်ခဲ့တဲ့စနစ်ထက်ပိုပြီးသင့်တော်မယ့်စနစ်ကို မတွေ.နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ သူတို.ပြောတာတွေက အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖူကူယားမားလို သမိုင်းနိဂုံးချုပ်ပြီ ဆိုပြီး အလန်.တကြားထအော်တာကတော့ ငါ့စကားနွားရနိုင်လွန်းလှပါတယ်။